vendredi, 29 juin 2018 19:15
Vakinankaratra: Faritra manana taha ambony amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka
Nampahafantarina ny mpanao gazety ny alakamisy 28 jona 2018, teto Antsirabe ny hetsika « Andro Nasionaly hoan’ny Fanjarian-tsakafo », andiany faha 14, izay ho tontosaina manoloana ny gara ny 6 sy ny 7 jolay 2018 ho avy izao . Ny foibem-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo na ny ONN no tompomarika amin’io hetsika mandritra roa andro io.
Isan’ny mbola nisafidianana an’i Vakinankaratra hanaovana ity hetsika ity moa ny mbola fananan’ity faritra ity taha ambony amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eo amin’ny kilonga, izay mbola mahatratra 65,3% izany.
« Ankohonana sehatry ny fanjarian-tsakafo lavorary, fanoitra ho an’ny fampandrosoana », moa no lohahevitra nampitondraina ity hetsika andiany faha-14 eto Antsirabe ity.
vendredi, 29 juin 2018 17:38
Fandriam-pahalemana: Antoky ny fampandrosoana
Raha vao miresaka Fandriam-pahalemana na sécurité, dia dahalo, vakitrano, kidnapping, halatromby, halabotry, fandrobana, mpangaro-paosy sy mpanendaka, mpangalatra moto sy fiara, no avy dia tonga ao an-tsaina.
Maro karazany ny resaka Fandriam-pahalemana na ny sécurité:
- Sécurité alimentaire, ny fahazoana antoka ireo sakafo vokarina sy amidy, fijerena ireny sakafo lany daty mitobaka sy miditra eto amintsika ireny;
- Sécurité des normes, antoka amin'ireny fitaovana ampiasaina, ohatra ireny fil rallonge lazaina mahazaka herin'aratra ambony ireny, nefa mitsonika ary mitarika firehetan'ny trano avy eo;
- Sécurité routière, aro loza amin'ny fifamoivoizana, fitsarana fiarakodia be kolikoly sy tsy ara-tekinika, tsy fanajana ny Lalàna mifehy ny fifamoivoizana;
vendredi, 29 juin 2018 15:30
Fianarantsoa: Mitohy ny fitokonan'ny mpampianatra
Nanatanteraka filaharana mamakivaky ny tanàna ireo mpampianatra mitokona ny marain'ity zoma 29 jona ity. Nitondra fanamafisam-peo sy kiririoka ary sora-baventy izy ireo mba ho fanehoana ireo fitakiana mbola tsy notanterahan'ny minisitra am-perinasa.
« Tsy hitsahatra ny tolona raha tsy tanteraka ireo fangatahana ireo », hoy ny mpitarika.
Tsy hiverina hampianatra ihany koa izy ireo arak'izany.
vendredi, 29 juin 2018 14:05
Antso nataon’ny Filoha: Namaly bontana ny sendikan’ny mpampianatra aty Vakinankaratra
Na nisy aza ny antso avo nataon’ny Filohan’ny Repobilika sy ny Praiminisitra, hiantso ny mpampianatra hiverina hampianatra dia namaly bontana izany ny sendikan’ny mpampianatra ato Vakinankaratra.
“Ataovy tonga any am-paosin’ny mpampianatra avokoa, tahaka ny natao tamin’ny mpitatitra aloha ny tombontsoanay dia hiverina hampianatra ihany koa izahay”, hoy ireo mpampianatra, izay nidina an-dalambe teto Antsirabe androany zoma 29 jona, niala teo amin’ny biraon’ny DREN nihazo ny biraon’ny Cisco, saingy tsy nahita mpiasa tao.
vendredi, 29 juin 2018 13:14
Fitrandrahana fasimainty Tolagnaro: Samy midina an-dalambe ny tompon-tany sy ireo manan’asa ao amin’ny QMM
Fihetsiketsehana roa sosona no miseho eto Tolagnaro androany maraina. Andaniny ireo mpiaramiombon’antoka (contractants) amin’ny orinasa mpitrandraka fasimainty QMM izay maneho ny alahelo sy ny hatezerany noho ny tranga miverimberina tato ho ato amin’ny fitakiana izay ataon’olona izay efa nahazo ny tambiny tamin’ny taniny lasan’ny fitrandrahana eo amin’ny lalana tsotra sy ny lalam-pirenena ka manakana izany ary manohitohina mpandrandraha maro sy ireo rehetra izay tokony misitraka iny lalana iny.
vendredi, 29 juin 2018 12:36
Mahajanga - Fisolokiana: Valonan-taratasy nofonosina vola no nanambakana olona ho « mercure »
Ireto olona telo, miaraka amin’ny naman'izy ireo roa hafa, izay mbola karohina, no tompon’antoka tamin’ny fisolokiana vola hatrany amin’ny 10 tapitrisa Ariary. Nilaza ho manana mecure izy ireo ary hamidy 14 tapitrisa Ariary.
Rehefa nandeha ny adivarotra dia raikitra fa 10 tapitrisa Ariary no nifanarahana ary efa nandefa 2,6 tapitrisa Ariary ireo mpividy izay any Antananarivo, ny 25 jona lasa teo. Ny 26 jona 2018 indray no fotoana ifanarahana fa hanaovana ny fifanakalozana teny amin’ny Bord de la mer.
Nilaza ireto mpisoloky ireto fa mila omena aloha ny ambim-bola 8 tapitrisa Ariary ahafahana manao fombafomba ao amina lavabato iray izay manodidina ny Bord de la mer ihany.
vendredi, 29 juin 2018 12:34
Election présidentielle: Dates fixées en saison de pluie
Le premier tour aura lieu le mercredi 7 novembre 2018, tandis que le deuxième tour se tiendra le 19 décembre 2018, c’est ce qui a été décidé en conseil du gouvernement de ce jour à Mahazoarivo.
vendredi, 29 juin 2018 09:43
Fifidianana filoham-pirenena: Tanterahina anaty fahavaratra
7 novambra 2018 ny fihodinana voalohany, 19 desambra 2018 ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena, araka ny tapaka nandritra ny filankevitry ny governemanta teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo androany.
vendredi, 29 juin 2018 09:29
Antsohihy: Mpanao gazety manao asa soa
Nanolo-tanana ny Kaominina ambonivohitra Antsohihy, renivohitry ny faritra SOFIA ny namana mpanao gazety ao amin’ny RNM (Radio Nasionaly Malagasy), Raymond Soavimanana, ka nanome sahafabe Canal Sat hahafahan’ny tanora, indrindra ireo fianakaviana sahirana, tsy manana fahafahana mividy fahitalavitra manaraka maimaimpoana ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra na ny Mondial tanterahina any Rosia amin’izao fotoana izao.
Omaly no nanoloran’i Raymond Soavimanana ireo fitaovana ireo tao Antsohihy.